कामना सेवा विकास बैंकले किर्ते कागजातका आधारमा करोडौँ ऋण दिएको खुलाशा, ६१ वर्षे बृद्धलाई मुद्दा ! | Diyopost - ओझेलको खबर कामना सेवा विकास बैंकले किर्ते कागजातका आधारमा करोडौँ ऋण दिएको खुलाशा, ६१ वर्षे बृद्धलाई मुद्दा ! | Diyopost - ओझेलको खबर
कामना सेवा विकास बैंकले किर्ते कागजातका आधारमा करोडौँ ऋण दिएको खुलाशा, ६१ वर्षे बृद्धलाई मुद्दा !
दियो पोस्ट शुक्रबार, चैत्र २५, २०७८ | १२:२१:१५
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र ‘ग’ वर्गको मान्यता प्राप्त कामना सेवा विकास बैंकले किर्ते कागजातको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी किर्ते कागजातको आधारमा ऋण प्रवाह गरेको पुष्टि हुँदा पनि बैंकका उच्च अधिकारी तथा सरकारी निकायको मिलेमतोमा ६१ वर्षिय एक बृद्धलाई मुद्दा चलाएर बैंकका ठूलाबडालाई उन्मुक्ति दिइएको खुलाशा भएको छ ।
झापामा रहेको बैंकको दमक शाखाबाट प्रवाह भएको एक करोड ५० लाख ऋणको विषय यतिबेला प्रहरी हुँदै सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालत झापा सम्म पुगेको छ ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका ५ घर भएका ६१ वर्षिय प्रेम कुमार तामाङका छोरा प्रकाश लामाले दमक झापाको नगरपालिका ५ मा छिरिङ ईन्टर प्राइजेज नामक कम्पनि खोलेका थिए । बुलेट बाइकको कारोबार गर्ने उद्देश्यले खोलेको उक्त कम्पनिले थप ‘ग्रोथ’ गर्नका लागि कामना सेवा विकास बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया शुरु गर्यो ।
उर्लाबारी ५ मै रहको कित्ता नम्बर ३४ र २९१ मा रहेको घर तथा जग्गा धितो राखेर बैंकबााट ऋण लिने उनीहरुको तयारी थियो । सोही तयारीका क्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाबाट कागजात प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्ने भयो । घरको नक्सा पास र घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र भएपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने प्रक्रिया शुरु गर्छ । उमेरले बृद्ध भइसकेका प्रेम बहादुर नगरपालिकाको कार्यालय पुगे कार्यालयको कम्पाउन्ड भित्रै उनले तराई मूलका एक जना नागरिकलाई भेटे ।
ती नागरिकले ‘म कार्यालयकै कर्मचारी हुँ के गर्दिनुपर्ने हो म गरिदिन्छु’ भनेपछि प्रेम बहादुरले नक्सा पास र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन आएको बताए । ती नागरिकले आफूले नै ती काम गर्ने भन्दै प्रेम बहादुरसँग भएको कागजात लिएर भोली ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर आउनु काम हन्छ भन्दै पठाए । भोलीपल्ट ती कर्मचारी भित्रै कम्पाउन्डमा बसिरहेका थिए । प्रेम बहादुरले कम्पाउन्ड भित्रै ३० हजार रुपैयाँ दिएर आफ्नो कागजात लिएर घर तिर लागे । सोही कागजातको आधारमा कामना सेवा विकास बैंकले उनका छोरालाई व्यापारका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दियो । तत्कालिन बैंकको प्रदेश १ प्रमुख सुजन छाराहाङ र शाखा प्रमुख सञ्जिव निरौलाको मिलेमतोमा ऋण दिए ।
२ वर्षसम्म प्रकाशको परिवारले मासिक किस्ता तिर्दै आएको थियो । तर, गत वर्षदेखि मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन भयो । लकडाउनकै अवधिमा बैंकलाई नियमित किस्ता बुझाउन नसकेपछि बैंकले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलामी गर्ने प्रक्रिया थाल्यो । प्रक्रिया थाल्ने पहिलो कदम हो– बैंकसँग भएको कागजात प्रमाणित गर्नु । यही क्रममा बैंकका कर्मचारी मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा गई घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाण र नक्सा पास लगायतको कागजात परिक्षण गर्न पुगे । तर, बैंकसँग भएको कागजात नगरपालिकामा भेटिएन । त्यसपछि बैंकले थाहा पायो उक्त कागजात त नक्कली पो रहेछ ।
बैंकले गरेको चरम लापरबाहीको थप विवरण अर्को अंकमा प्रकाशन हुने छ ।
शुक्रबार, चैत्र २५, २०७८ | १२:२१:१५